“ဒါတွေအတွက် ဘယ်သူမှ ကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့ဘူး” - ဘယ်လ်ဂျီယံတွင် ဆိုးရွားစွာ ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရှင်းလင်းမှုများဆောင်ရွက် - Xinhua News Agency
ဘရက်ဆဲလ် ၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လော်ရန့် (Laurent) က သူ့အနေဖြင့် အသက် ၄၀ နှစ်အရွယ်ရောက်လာသည်အထိ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ Wallonia ဒေသ Verviers မြို့ငယ်လေးတွင် ယခုကဲ့သို့ အပျက်အစီးများဖြစ်ရသည်အထိ အလွန် ဆိုးရွားသော ရေကြီးရေလျှံမှု မြင်ကွင်းမျိုးကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မမြင်ဘူးခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သော ဇူလိုင် ၁၃ ရက် မှ ၁၆ ရက်အထိ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းဒေသတွင် အလွန်ဆိုးရွားသောရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ ၎င်းတို့၏ ပုံမှန်လူနေမှုဘဝကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သလို မြို့တစ်ခုလုံးသည်လည်း အမိုက်သရိုက်များနှင့်ရွံ့ညွန့်များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။“ ဒါဟာ မိခင်သဘာဝကြီးက ဒီနေရာမှာ အန္တရာယ်သတိပေးအချက်ပြလိုက်တာပါပဲ” ဟု လော်ရန့် က ဆင်ဟွာသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာမြို့လေးတွင် သန့်ရှင်းရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်အားပေးများသည် အလျင်အမြန်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသလို ဈေးဆိုင်များ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း အပျက်အစီးပုံများကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန် တက်နိုင်သမျှ လုပ်ကိုင်နေကြသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ Verviers မြို့တွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အပျက်အစီးပုံများအကြားလမ်းလျှောက်နေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ ဒါတွေအတွက် ဘယ်သူမှ ကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးလေ” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါသဘာဝဘေးကြောင့် ဇူလိုင် ၁၈ ရက်အထိ သေဆုံးသူ ၃၁ ဦးရှိခဲ့ပြီး အခြား ၁၆၃ ဦး ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအကျပ်အတည်းဖြေရှင်းရေး စင်တာ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့ကြီးမြို့ငယ်ပေါင်း ၁၂၀ ရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီး မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း နှင့် မြစ်ရေကြီးခြင်းများ ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ရက်များတွင် မိသားစုပေါင်း ၄၀,၀၀၀ နီးပါးသည် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါရေကြီးမှုသည် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကာလအတွင်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ကြုံတွေ့ဘူးခြင်းမရှိသော အဆိုးရွားဆုံး သဘာဝဘေးဒဏ်ကြီးဖြစ်သည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ Verviers မြို့တွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အမျိုးသားနှစ်ဦးက အိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်နေသည်ကို ဇူလိုင် ၁၆ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ အမျိုးသား အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းရေး စင်တာက သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သော ဒေသများတွင် ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၊ သို့သော် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာမူ အခြေခံအားဖြင့် အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
Verviers မြို့ခံများသည် ၎င်းတို့၏ နေအိမ်များ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရေကြီးမှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသဖြင့် ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေကြရရှာသည်။
ရေကြီးမှုကြောင့် မြို့တွင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားသော ရေနုတ်မြောင်းများတွင် အမှိုက်သရိုက်များ ပိတ်ဆို့နေရာ မြို့တော်၏ ရေစီးရေလာစနစ်အတွက် ယင်းအမှိုက်ပုံများကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန် ၎င်းတို့က ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ကိုင်နေကြရသည်။
Meuse မြစ်ကြီးထဲတွင် မော်တော်ကားအချို့မျောပါနေသလို ယင်းမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်ရှိ လမ်းကြိုလမ်းကြားများတွင် အမှိုက်သရိုက်များ နှင့် ရွံ့ညွန်များ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိနေသည်။
“ ဒါက ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်၊ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့က ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမယ်” ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Alexander De Croo ကဆိုသည်။
“ အာမခံကုမ္ပဏီတွေအားလုံးအနေနဲ့လည်း အဲလိုနည်းလမ်းအတိုင်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ၊ ဒါမှသာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အာမခံလျော်ကြေးငွေတွေကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးရကြမှာပါ” ဟု ၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Wallonia ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့က ရေကြီးမှုဒဏ်အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရသည့် ဒေသမှ ပြည်သူများအား အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ငွေ ယူရို ၂.၅ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၉၅ သန်း) ကို ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ပထမဆုံးနေ့တွင် ပေးအပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီကလည်း ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘေးဒဏ်သင့်ပြည်သူများအား လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်နိုင်ရန် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ကလည်း အရေးပေါ်ရံပုံငွေ ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကို ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ဗဟိုအစိုးရက ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် ကျရောက်သော ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့ မတိုင်မီ တစ်ရက်အလို ဇူလိုင် ၂၀ ရက်ကို နိုင်ငံတော် ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
“No one was prepared for this” — Belgians clear up hometowns after devastating floods
BRUSSELS, July 18 (Xinhua) — In his 40s, Laurent has never seen suchadevastating scene in Verviers,asmall town in Belgium’s Wallonia region, where flash floods, triggered by torrential rains from Tuesday to Friday, swept away their normal life, leaving debris and mud.
“This is the first time that Mother Nature has wreaked havoc here,” Laurent told Xinhua, as volunteers rushed to help in the town on the outskirts of Liege city, lending shopkeepers and local business ownersahand with clearing the damage.
“No one was prepared for this,” he said.As of Sunday, 31 people have died while 163 people are still missing due to the disaster, according to the Belgian Crisis Center.
Around 120 cities and towns across the country were affected by the floods and nearly 40,000 families have no access to electricity after days of torrential rains and burst rivers that were unseen in Belgium for almost 200 years.
The national crisis center confirmed that searches are still continuing in the affected areas but the rescue operations are basically over.
In Verviers, local residents cutasad and desperate figure after floodwaters engulfed their homes and businesses.
They huddled in groups while frantically clearing away the damage in the aftermath of the floods, which dumped possessions into the tunnel that once connected the local high street to the city’s outer perimeters.
In the river Meuse,afew cars were flipped over, while the streets surrounding the river were filled with debris and thick layers of mud.
“There isalink with climate change, we have to prepare our services for it,” said Belgian Prime Minister Alexander De Croo.
“We want to make sure that all insurance companies can work in the same way, so that people can be compensated as quickly as possible,” he added.
The regional government of Wallonia has released 2.5 million euros (2.95 million U.S. dollars) in emergency aid to help the hardest-hit communities to pay for basic necessities in the first days after the floods.
A number of crowd funding actions have been started by private individuals to raise aid funds, while an emergency account has been opened via the Red Cross, where people can make donations to support the victims.
The Federal government has setanational day of mourning on July 20, on the eve of Belgium’s National Day which falls on July 21.
(1)Aerial photo taken on July 16, 2021 shows broken trees after floods in Verviers, Belgium. (Xinhua/Zhang Cheng)
(2)A woman walks pastatunnel filled with garbage after floods in Verviers, Belgium, July 16, 2021. (Xinhua/Zhang Cheng)
(3)People throw away broken furniture after floods in Verviers, Belgium, July 16, 2021. (Xinhua/Zhang Cheng)
မျိုးဗီဇသစ် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ကာကွယ်ရန် အိန္ဒိယ၊တောင်အာဖရိကနှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံများမှ ခရီးသွားများ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ဘယ်လ်ဂျီယံကန့်သတ်